Obama: Taageero ayaan siineynaa Ciraaq - BBC News Somali
Obama: Taageero ayaan siineynaa Ciraaq
Image caption Kooxda ISIS ee ka dagaalameyso dalka Ciraaq ayaa Mareykanka uu ka fikiraayaa
Maraykanka waxa uu balaayiin doollar ku bixiyey qalabeynta iyo tababarida ciidanka Ciraaq si ay u hantaan oo ay u ilaaliyaan ammankooda.
Balse haatan Maraykanka waxa soo food saaraya xaalad ku qasbaysa in mar kale haddana uu dhaqaale geliyo dalka iraaq, sababtoo ah in badan oo ka mid ah ciidanka Ciraaq ee uu tababaray ayaa baxsaday.
Mar uu ka jawaababayey waalaca isasoo taraya ee laga muujinayo xaaladda dalka Ciraaq ayaa madaxweynaha maraykanka Barack Obama waxa uu saxaafada u sheegay in uu ka fikiraayo tallaabooyin dhowr ah.
"wixii aan aragnay dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay waxay tusaale u yihiin in Ciraaq u baahan doonto taageero dheeri ah. Taageero dheeri ayay inooga baahan doontaa, waxay sidoo kale taageero ay uga baahan doontaa beesha caalamka.” Ayuu yiri Barak Obama oo intaa raaciyay, “Marka kooxdayda waxay dadaal 24 saac ah ku doonaysaa in ay ku soo saarto qaabka ugu wanaagsan ee taageera aan ugu fidin karno Iraaq. Ma jirto tallaabo aan is leeyahy ma qaadi kartaan waayo dan inoogu jirta in aan hubsano in kooxdan jihaad doonka ah aanay si joogta ah cagta u dhigan iraaq ama afghanistan.”
Arrimhaas uu taabtay madaxweynaha waxa ka mid ah in la qaado tallaabo militari, oo ay u badantahay in lagu fulin doono weeararo ay geystaan diyaaradaha aanay cidna wadin ee drones-ka ama duqeyn dhinaca hawada ah.
Balse ma dhici doonto in ciidan maraykan ah la geeyo dalkaasi ciraaq. Sidaasi waxa cadeeyey saraakiisha ka shaqeeya aqalka cad.
Jen Psaki, oo ah afhayeen ka tirsan wasaarada arrimaha dibeda, waxa ay sheegtay in waqti dheeri ah ay gelinayaan go’aan ka gaarista dhowr arrimood, arrimahaasi ka mid maahan ciidamo ay geeyaan Ciraaq.
Sannadkii la soo dhaafay Obama waxa uu dib uga gurtay in uu amro in la duqeeyo Suuriya, saadaashuna waxay muujinaysaa in marka hore uu raadin doono taageero caalami ah ka hor inta aanu qaadin weerar military qaabkuu noqdaba.
Dagaallada sii xoogaysanaya ee ka soo cusboonaaday Ciraaq ayaa waxa ka faa'ideysanaya dadka dhaleeceeya madaxweynaha Mareykanka, oo qaar ka mid ah ay ku doodayaan in ay ahayd in madaxweynuhu uu dhibaatadani horay uga sii baarandego oo wax ka qabto.
Wax ka yar 3 sanno markii ciidamada maaykanka ay ka baxeen Ciraaq, arrintaasi waxaa lagu tilmaamay in ay ka mid ahayd guulaha ugu weyn ee uu gaaray madaxweyne Obama, waxa hadda muuqata in amaanataasi tahay mid lagu deg degay.